तिथि मेरो पत्रु »5के गरेको र सफल अनलाइन डेटिङ को Don'ts
द्वारा अप्रिल Aragam
5 के गरेको र सफल अनलाइन डेटिङ को Don'ts
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 22 2020 |3मिनेट पढ्न
अनलाइन डेटिङ नयाँ मान्छे भेट्न भन्दा लोकप्रिय तरिका भएको छ. अनलाइन डेटिङ, केहि जस्तै, यसको सकारात्मक र नकारात्मक अंक छ. त्यसैले तपाईं यो आफैलाई लागि एक सफल बनाउन सक्छौं कसरी? यो लेख रूपरेखा5तपाईं अनलाइन बढी सुचारू एक सानो डेटिङ चलाउनु मदत गर्नेछ भन्ने गरेको र don'ts गर्न.
को: यो डेटिङ प्रोफाइल भरें
यो एक डेटिङ प्रोफाइल मा प्रश्नहरूको जवाफ महत्त्वपूर्ण. यो पहिलो मौका मान्छे तपाईं बारेमा एक बिट सिक्न प्राप्त छ. तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कहानी बताउन छैन, तर तपाईं कम से कम एक जोडी महत्त्वपूर्ण तथ्य दिन चाहनुहुन्छ. मेरो बारेमा धारा तपाईं काम वा स्कूल जाने कि उल्लेख गर्न चाहनुहुन्छ उल्लेख, तपाईं आफ्नो मुक्त समय मा गर्दै आनन्द उठाउन के, र अन्य मान्छे देखि अलग तपाईं सेट एक बिट बेजोड कुरा उल्लेख. तपाईं एक महिना दुई पटक रासनको स्वयंसेवकको रूपमा गर्नुहुन्छ? तपाईं मात्र क्लासिक्स यस्तो लेखिएको एक पुस्तक क्लब आबद्ध हुनुहुन्छ? यो उल्लेख! यो तपाईं एक सानो कुरा जस्तो लाग्न सक्छ, तर कसैले आफ्नो प्रोफाइल पढेर यो तपाईं अरु देखि बाहिर खडा मदत गर्नेछ.
के छैन: एक सम्बन्धको लागि आफ्नो आशा र सपना बारेमा कुरा
यो तपाईं एक आकस्मिक सम्बन्ध वा केही बढी दीर्घकालीन खोज्नु कि उल्लेख बिल्कुल ठीक छ. तपाईं नै कुरा चाहन्छ भेट्न चाहन्छु. के तपाईं सँगै आफ्नो पहिलो क्रिसमस खर्च गर्न जाँदै हुनुहुन्छ कसरी कुरा सुरु भने, तपाईं को सपना देख गरिएको छु विवाह कस्तो प्रकारको, वा तपाईं चाहनुहुन्छ कति बच्चाहरु, तपाईं बन्द क्षमता मिति तर्साउन जाँदै हुनुहुन्छ. तपाईं गम्भीर बन्न छु जब पछि लागि ती कुराकानी छोड्नुहोस्.
को: हाल तस्वीरहरु जोडें
तपाईं एक धमाके जस्तै महसुस गरे भनेर पार्क मा तीन वर्ष पहिले लिएको तपाईं को भनेर फोटो रुचि हुन सक्छ, तर यो एक अधिक हाल फोटो प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण. मान्छे के तपाईं अझै पनि धेरै पुरानो फोटो जस्तै हेर्न तर्क सक्छ तापनि समय परिवर्तन. तपाईंको बाल रंग, लम्बाइ, र शैली शायद परिवर्तन गरेका छन्. तपाईं गिरा वा केही पाउण्ड धारण गरेको हुन सक्छ. तैपनि आफ्नो व्यक्तिगत शैली परिवर्तन हुन सक्छ. तपाईं एक फोटो पोस्ट र व्यक्ति कोही पूरा भने, उनीहरूले फोटो मा व्यक्ति आषा गर्न जाँदैछन्. व्यक्ति तपाईं त्यो केही अधिक बाल र एक सानो कम पेट थियो जहाँ एक दुई वर्ष पुराना फोटो माथि थियो भेट्नुभयो भने तपाईं लाग्छ कसरी बारेमा सोच्नुहोस्. यो सतही मानिसहरू भेला भएका जान्न चाहन्छु गर्न छैन.
के छैन: पूरा गर्न पनि लामो प्रतिक्षा
अनलाइन डेटिङ साइटहरूमा नयाँ मान्छे भेट्न एक महान ठाँउ हुन सक्छ, तर तिमी शायद सम्बन्ध अन्त मा महिना को लागि अनलाइन रहन चाहँदैनन्. यो अनलाइन देखि व्यक्ति मा आफ्नो नयाँ सम्बन्ध लिन महत्त्वपूर्ण. तपाईं इमेल र पदहरू साटासाट एकपटक तपाईं अर्को कदम गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ, फोनमा कुरा छ जो. तपाईं अझै पनि जडान महसुस र भेट्न चाहन्छु भने, एक मिति बनाउन! तपाईं टाढा बस्न र बस प्रत्येक अन्य पूरा गर्न ड्राइव गर्न सक्दैन भने, कम्तीमा Skype तपाईं गर्न सक्छन् सम्म.
को: आफ्नो पेट भरोसा
तपाईं किनभने उहाँले भन्नुभयो गर्नुपर्छ कुरा वा एक पृष्ठभूमि गर्दै माध्यम कसैले बारेमा एक हास्यास्पद भेटिन्छ भने तपाईं माथि जोड छैन भन्ने कुरा पाएका छौं जाँच, भाव भरोसा. तपाईं पक्कै पनि यसलाई बारेमा प्रश्न गर्न सक्छन्, तपाईं अझै पनि जस्तै महसुस तर यदि केहि बन्द छ, यो दूर फिर्ता र नयाँ व्यक्तिहरू भेट्न समय हो. आफ्नो मुखबाट अर्को कुरा एक untruth छ भने तपाईं झूट र तथ्य बाहिर क्रमबद्धता र निरन्तर सोच नयाँ सम्बन्ध को शुरुवात खर्च गर्न चाहँदैनन्. सधैं आफ्नो पेट महसूस भरोसा.
अनलाइन डेटिङ सधैं एक चिकनी सवारी हुनेछैन. तपाईं गल्ती र अर्को समय को लागि राम्रो थाहा छौँ.
तपाईंको अनलाइन सामाजिक प्रोफाइल तपाईंको नाता Wrecking छ?
पार्टी एक Sensational एकल होस्टिंग दस कदम